Marketing Buzzwords avy amin'ny Mashable | Martech Zone
Ireo olona ao Mashable dia nametraka an'ity infographic ity 30 andro amin'ny Buzzwords Marketing. Amin'ny maha-bandy tsy mahazaka marketing miteny, Mankasitraka hatrany aho rehefa mijery tsara marketing BS. Hamarin-tena aho, na izany aza, ary hiaiky fa heveriko fa feno an'io sary io fotsiny.
Fepetra toa marketing marketing, Sary torohay ary gamification tsy marketing buzzwords, teny tena izy ireo izy ireo izay tokony ho takatry ny mpivarotra rehetra. Ary ny olako lehibe indrindra dia ilay voambolana Miverena amin'ny fampiasam-bola voatanisa ho buzzword. Ny ROI dia tsy buzzword… filàna tanteraka izany. Manohy mahita izahay fa tsy mahomby ireo masoivoho sy orinasa tsy manara-maso ny fiverenan'izy ireo amin'ny fampiasam-bola. Ary rehefa tsy mahomby ny ROI azy ireo dia mamono ny orinasany izany fa tsy ny marketing fotsiny.
Ny sasany amin'ireo teny hafa dia mendri-piderana, saingy mbola tsy ratsy. Tiako ilay teny hoe snackable…… matetika izahay dia miresaka minigraphics - infografika izay mifantoka be amin'ny data iray fa tsy ny tantara iray manontolo. Somary tsara kokoa ny atin'ny snackable ary manondro ny fihetsiky ny fihinanana azy ireo. Ny tolo-kevitra momba ny sanda sy ny KPI dia mety ho buzzwords ihany koa saingy zava-dehibe satria ny mpivarotra dia mifantoka amin'ny hafatr'izy ireo sy mandrefy ny valiny.
Tags: Fampielezan-kevitra 360marketing marketinglehibeclickabilitymarketing ara-nofocplmpiandraikitrafampahavitrihana manokanahaino aman-jery nahazoandraikitragamificationmpijirika fitomboanaideationtraikefa lalinaSary torohaykpiteratany dokam-barotrat-varotraROIfahitalavitra faharoashowroomingatiny azo nohaninavarotra sosialysolomoivompitarika eritreritraresaka roa tontasanda kevitraniparitaka be
Penguin 2.0: Hevitra efatra tokony ho fantatrao
2 Jun 2013 amin'ny 8:03 AM
Tiavo ny lisitrareo, tsy dia mahazatra ahy ireo teny ireo, ka heveriko fa tena ilaina tokoa ny mahatakatra azy ireo bebe kokoa.
Jun 7, 2013 ao amin'ny 10: 05 PM
Lisitra tsara sy mampiala voly Doug. Ny ankamaroantsika dia meloka noho ny fampiasana farafaharatsiny farafaharatsiny andian-teny. Izy io dia karazana fampahatsiahivana ahy ny lalao ataon'ny orinasa tamin'ny taon-jato farany antsoina hoe Buzzword Bingo. Tonga lafatra ho an'ny antso varotra lava na fivorian'ny orinasa. Mety mahatadidy ny sasany. Mbola mampitsiky ahy ihany rehefa mieritreritra an'io. Miombon-kevitra aminao aho momba ny filan'ny ROI tena ilaina, saingy miaiky aho fa mitanila 🙂